Koofur galbeed oo guddi u saartey shacabka Muuse Biixi soo bililiqaystey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Koofur galbeed oo guddi u saartey shacabka Muuse Biixi soo bililiqaystey
Madaxweynaha Koofur galbeed ayaa guddi u saaray shacabkii xoogooda geliyay Laascaanood ee horjooge Muuse Biixi sida tooska ah u bililiqaystey kadibna gawaadhida ku gurey, ayadoo lagu xumeynayo deegaanka Daraawiishta.
”Waxaan raadin doonaa hantida la bililiqaystey haddii ay suuragal tahay. Falkan ayaa gebi ahaanba kafog diinta Islaamka ilaa haddana waxa ka aamusan culimada iyo waxgaradka beesha ISAAQ ee magacooda horjooge Muse Biixi falkan ku sameeyay.
”Anagoo arkayna falka wuxuushnimo e lagula kacay muwaadiniita Somaliyeed ee maalgashaday Laascaanood waxaan u saaray guddi ka soo talo-bixisa sida ugu haboon ee talaabadan wax looga qabanayo ayuu yiri Lafagareen.
Muuse Biixi ayaa si toosa sadex maalmood oo xiriira u soo tarxiilay in ka badan 2000-kun oo qof oo hadda badankoodii soo gaareen Butlaan.